Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -emegharị na Thailand » Ọtụtụ ndị Thailand na -emepe ọzọ n'ime izu atọ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Iwughachi • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Emepere emepe ọzọ na Thailand
Phuket na-ahụ ọkwa maka ịmalitegharị njem Thailand kemgbe mmalite nke COVID-19 na-eji mmemme njem Sandbox dị ka akwụkwọ ntuziaka ya.
Tinyere Samui Plus na mmemme ndọtị 7+7, nke a egosila na ọ bara nnukwu uru n'ịkwalite njem nlegharị anya Thai.
Ihe karịrị ndị njem mba ụwa iri abụọ na asaa gara Thailand n'okpuru Phuket Sandbox, Samui Plus na mmemme ndọtị 27,000+7.
Thailand ejirila nwayọọ nwayọọ maliteghachi njem nlegharị anya site na Julaị 1, Julaị 15, na Ọgọst 16.
Akara akpụkpọ ụkwụ Phuket
Dị ka ebe ọkwọ ụgbọ ala nke ịmalitegharị, Phuket Sandbox anabatala ndị ọbịa 26,400 n'ime ọnwa abụọ mbụ, site na mwepụta ya na Julaị 1 ruo Ọgọst 31, na -emepụta nde Baht 1,634.
Ego ha nwetara gụnyere nde 565 baht na ebe obibi, nde 376 baht maka ịzụ ahịa na njem, nde 350 baht na nri na ihe ọ beụ beụ, nde 229 baht na ọrụ ahụike na ahụike yana nde 114 baht na ndị ọzọ. Ọnụ ego ezumike ndị ọbịa na Phuket na July-August bụ 61,894 baht, site na 58,982 baht edere na July.
The Akara akpụkpọ ụkwụ PhuketAhịa isi mmalite ise kachasị ukwuu nọgidere na USA na ndị bịarutere 3,482, ndị UK sochiri ya bụ 3,351, Israel ndị bịarutere 2,909, Germany nwere ndị bịarutere 2,092, na France nwere ndị bịarutere 2,083.
N'ịgba ọgwụ mgbochi ọ bụla na enweghị mkpa ịpụ iche, ndị bịarutere 26,400 abatawo na Phuket n'ụgbọ elu mba ofesi nke ndị isi ụgbọ elu na -arụ site na isi gburugburu ụwa. Nke a gụnyere Thai Airways International si Copenhagen, Frankfurt, Paris, London, na Zurich; Etihad Airways si Abu Dhabi; Qatar Airways si Doha; EL AL Israel ụgbọ elu si Tel Aviv; Cathay Pacific si na Hong Kong; Emirates sitere na Dubai, yana ụgbọ elu Singapore si Singapore.
Ndị mbata a ewepụtala ọnụ ụlọ 366,971 na ụlọ nkwari akụ SHA Plus dị na Phuket - abalị 190,843 na July na abalị 176,128 n'ọnwa Ọgọst, n'otu n'otu. Site na ọnụ ụlọ ime ụlọ 95,997 dị ugbu a na akwụkwọ maka Septemba, ngụkọta ọnwa atọ maka July ruo Septemba dị ugbu a na abalị ime ụlọ 462,968. N'ilepụ anya n'ihu, ngụkọta nke ọnụ ụlọ ugbu a maka oge Ọktoba 2021 ruo February 2022 bụ abalị ime ụlọ 24,947.
Achọrọ ndị njem nleta Phuket Sandbox ka ha nọrọ n'ụlọ nkwari akụ SHA Plus dị na Phuket maka nchekwa ha agbakwunyere. Asambodo SHA Plus na-egosi ụlọ oriri na nkwari akụ na-ezute usoro nchekwa iji chịkwaa COVID-19, yana kwa na opekata mpe 70% nke ndị ọrụ ya agbaala ọgwụ mgbochi.
N'akụkụ usoro ahụike na nchekwa dị mkpa maka ndị njem mba ofesi na-eleta, mmemme ịgba ọgwụ mgbochi Phuket dị ka Ọgọst 31 ahụla 92% nke ndị obodo ahụ natara ọgwụ mgbochi mbụ ha, ebe 75% emechala usoro onunu abụọ.
Ịgba ama nke abụọ nke Ọdịdị nke Thailandns iji maliteghachi njem nlegharị anya, ewepụtara mmemme Samui Plus na July 15, na-enye ndị ọbịa ohere ileta Ko Samui, Ko Pha-ngan na Ko Tao. Ha nwere ike ime nke a site na ịbanye na Samui ozugbo ma ọ bụ, site na Ọgọst 16, site na njem ebe ahụ mgbe mbụ ha nọrọ abalị asaa n'okpuru Phuket Sandbox, nhọrọ ikpeazụ nke ndị ọbịa 7 mere ya.
N'ime ọnwa mbụ na ọkara, site na Julaị 15 ruo Ọgọst 31, mmemme ahụ anabatala ndị ọbịa 918, yana ime ụlọ 6,329, na -akpata nde Baht 37.6. Ọtụtụ n'ime ndị mbata a sitere na mba Europe na United States.
Ihe enyemaka na -eme ka mmemme a dị mfe bụ ụgbọ elu 92 nke akara akara nke Bangkok Airways n'etiti Samui na Bangkok maka mbufe/mbufe ndị njem na Samui Plus na -ejikọ site na isi obodo Thai. Na mgbakwunye, ụgbọ elu ahụ na -arụkwa ụgbọ elu n'etiti Phuket na Samui maka ndị ọbịa si na Phuket Sandbox.
N'ime nkeji iri na ise nke ikpeazụ nke afọ a ruo na Disemba 9, Samui Plus edekọla aha ụlọ ime ụlọ 9,195 n'akwụkwọ site na ndị ọbịa 860. Ndị a gụnyere abalị 7,397 debere ndị ọbịa 591 n'okpuru Samui Plus na abalị ime ụlọ 1,788 site na ndị njem 269 n'okpuru Phuket Sandbox na Mgbasa 7+7.
Mgbakwunye Phuket Sandbox 7+7
Amalitere na Ọgọstụ 16, 2021, mmemme ndọtị Phuket Sandbox 7+7 bụ ihe ọhụrụ nke 'Thailand Reopening' nke enyere ndị njem ohere ka ha gaa leta ọtụtụ ebe na nleta ha na mba ahụ.
Mmemme a na-enyere ndị njem mba ofesi aka iwelata ọnụnọ dị mkpa na Phuket site na abalị 14 ruo 7, emesịa enwere ike nọrọ abalị asaa ọzọ na Krabi (na ebe enyere Ko Ko Phi Phi, Ko Ngai, ma ọ bụ Railay Beach), na Phang-Nga (na Khao Lak ma ọ bụ Ko Yao), ma ọ bụ na Surat Thani (na Ko Samui, Ko Pha-ngan, ma ọ bụ Ko Tao).
Site na Phuket, enwere ike iru Surat Thani Samui, Ko Pha-ngan na Ko Tao site na ụgbọ elu ụgbọ elu nke Bangkok Airways si Phuket; Krabi's Ko Phi Phi, Ko Ngai na Railay Beach nwere ike ị nweta ụgbọ mmiri gbaara agbaziri na SHA Plus na ọrụ ụgbọ mmiri site n'akụkụ ndị a kwadoro; Phu-Nga's Khao Lak nwere ike nweta ọrụ mbufe ụgbọ ala nke SHA Plus gbaziri site na Phuket, ebe Ko Yao Noi ma ọ bụ Ko Yao Yai nwere ike iru site na SHA Plus gbaara ezi àmà na ọrụ ụgbọ mmiri site na oghere ndị akwadoro.
Ebe ndị na -abịanụ ka ịmalitegharị ka ndị njem mba ofesi gbaa ọgwụ mgbochi ọrịa
Ebe ndị ọzọ gụnyere Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin, na Pattaya, na -eme atụmatụ ịmalitegharị site na Ọktoba 1, 2021.
Nke a bụ ka Thailand na -aga n'ihu na -enwe nnukwu ọganihu na ịgba ọgwụ mgbochi nke ndị obodo ahụ, ebe ọ bụ na mwepụta malitere na June 7.
Site na Febụwarị 28 ruo 4 Septemba 4, 2021, ngụkọta ndị mmadụ 9,879,371 agbatịala ọgwụ mgbochi, ma ọ bụ mechaa usoro ọgwụ abụọ maka ọgwụ COVID-19, mmadụ 25,104,942 ọzọ natara ọgwụ mgbochi mbụ, ebe mmadụ 603,363 ọzọ enwetala ọgwụ mgbochi nke atọ ha, dị ka Ngalaba Ahụike Ọha si kwuo.